Fitaovana haingon-trano malefaka sy metaly manjelanjelatra toy ny lamba – Lamba metaly - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Akanjo toy ny lamba malefaka sy metaly mamirapiratra - Gorda vy
Akanjo toy ny lamba malefaka sy metaly mamirapiratra - Gorda vy
2021 / 06 / 01 FisokajianaInterior design 6316 0
Ny lambam-by dia fitaovana haingon-trano izay nampiasaina matetika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Manitatra ny fari-pitaovana haingon-trano misy izy io, ary manome fananana haingon-trano anatiny tena tsara. Nanjary ankafiziny vaovao amin'ny kanto haingo maoderina ankehitriny. Hodinihintsika anio, inona ny lambam-by?
01. Inona ilay ridao vy?
02. Toetra mampiavaka ny lamba amin'ny ambain vy
03. Karazana lambam-by
04.Ny fomba fametrahana ny lambam-by
05.Ny fampiharana ny lambam-by
Inona no atao hoe ridao vy?
Ny lambam-by, fantatra amin'ny anarana hoe lambam-by vita amin'ny vy sy lamba vy, dia fitaovana haingo maoderina vaovao. Izy io dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, tariby alimika aluminium-magnesium, varahina, vy vy ary fitaovana firaka hafa. Izy io dia manana ny fahalemen'ny lamba sy ny famirapiratan'ny vy, ary be mpampiasa amin'ny sehatry ny fametrahana sary kanto ao anatiny.
Ny lambam-by vita amin'ny vy, azo ahinjitra havia sy havanana toy ny ambainy. Ampiasaina betsaka amin'ny fizarana habakabaka, haingon-trano amin'ny rindrina, efijery sns .. Izy io koa no fitaovana mety indrindra amin'ny efitrano fampirantiana, fandravahana amin'ny hotely.
Ny metaly voajanahary dia manaloka ny volon'ny metaly voajanahary, miaraka amin'ny fiovana samihafa amin'ny hazavana sy ny vokan'ny taratra vokarin'ny hazavana. Amin'ny alàlan'ny lambam-by vy, mamorona habaka misaraka nefa mitohy amin'ny ankapobeny. Izy io dia karazana fomba fijery manjavozavo tsy mitovy amin'ny fitaratra, manome ny olona fahatsapana fisokafana amin'ny fahitana sy sary an-tsaina tsy manam-petra.
Ny fampiasana am-pahendrena ny famolavolana jiro dia afaka manamboatra azy amin'ny lambam-by amin'ny alina, ho lasa muslin malefaka, mamorona toerana manjavozavo sy poetika.
Toetra mampiavaka ny lambam-by
Ny lambam-by dia namboarina ary azo atao varahina, Chrome, volamena ala-tahaka, varahina fahagola, metaly, kafe ary loko hafa. Izy io dia maro loko, tsy miova ary mahatohitra harafesina. Ny lokony, ny sakany ary ny hahavony dia azo amboarina araka ny sitra-pony. Izy io koa dia azo atao frosted, laser ary effets hafa.
Misy elanelam-potoana iray eo anelanelan'ny vondrona lavaka harato metaly harato tsirairay, ary ny halavirana sy ny hateviny dia azo alamina mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Amin'ny ankapobeny dia misy 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ary ny famaritana hafa.
1, manana tanjaka avo, fanoherana ny harafoana, fikojakojana mora ary fiasa avo be izy io. Ny amboniny dia voatsabo manokana, mahatohitra kokoa ny hafanana avo ary tsy mihena.
2, manana vokarin'ny haingon-trano mazava sy matanjaka izy io, ary afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny firafitry ny trano.
3, mora sy haingana ny mametraka azy.
4, hazavana hafa, tontolo iainana samihafa, vanim-potoana samihafa, zoro fandinihana samy hafa, ny vokany hita maso dia manankarena tokoa.
5 、 Ny takelaka fahavaratra dia hanivana ny taratry ny masoandro hamokatra aloka ary hampihena ny hafanan'ny efitrano. Ny fifindrana amin'ny ririnina dia mamela ny masoandro hamirapiratra amin'ny alàlan'ny, mampihena ny vidin'ny insulation.
6 、 Izy io dia ampiharina amin'ny fotoana sy fampiasana isan-karazany, mampiseho toetra milay sy toetra miavaka.
Ny lambam-by vita amin'ny metaly dia miaraka amina firavaka indostrialy volamena, ary azo ampiharina amin'ny efitrano anatiny na amin'ny besinimaro miaraka amina fomba miavaka. Izy io koa dia manana karazana bolongana isan-karazany.
a. Toy ny peratra
d. Jereo ny lambam-by
04.Fomba fametrahana ny lambam-by
Matetika misy fomba roa hanantonana ny lambam-by vy. Ny iray dia ny manantona ny lambam-baravarankely eo anilan'ny ambain-drivotra vy amin'ny alàlan'ny fikorisa ny toro-lalana. Ny iray kosa manantona ny lamba fitaratra manontolo, amin'ny rindrin'ny ambainy vy. Izy io dia misy amin'ny fomba fametrahana hafa, raikitra, mihetsiketsika na esorina, mamela ny fiovana bebe kokoa amin'ny endrika sy fiasan'ny façade.
a.Chongqing Vanke 17 Mile
Famolavolana anatiny: DESIGN ENJOY
Ny tarehy opera Sichuan no sary hita maso indrindra. Ilay endrika dia mampiditra mampivadika ny endrika kanto an'ny tarehy opera Sichuan ho eny amin'ny habakabaka. Ny metaly hosodoko lehibe misy jiro malefaka amin'ny ambainy ary loko miloko lamaody, samy firafitra indostrialy na fampiroboroboana ny kolontsaina, dia fifandonana amin'ny kolontsaina nentim-paharazana sy ny vokatra fironana.
b. Fandikana ny boaty mihantona, Portugal
Ity tetik'asa ity dia ny fanavaozana sy fanitarana trano fisakafoanana. Ny habaka anatiny dia mihodina manodidina ny fametahana fampiatoana ambainy vy. Ny firafitry ny harato manify sy mangarahara dia mitovy amin'ny tondra-drivotra mahery, mitondra fanovana mahery vaika amin'ny tampon-trano malalaka sy manjavozavo amin'ny fomba kanto.
d. Kintana mena an'i Xi'an Tianpu Landscape
Mpanjifa boribory manodidina ny dobo ranomainty. Ny lambam-by vita amin'ny alim-by vita amin'ny alim-by dia mihantona ao, ary toa mihaona ny anton-drongony. Izy io dia toy ny rahona sy zavona, ka mameno ny habaka manontolo amin'ny "ink qi" an'ny literatiora izay mamontsina ny tratra ary mamorona rahona. Izy io dia mamorona horonantsary zavakanto mavitrika miaraka amin'ny olona amin'ny alàlan'ny mandeha anelanelan'ny tsipika an'ny ranomainty sy rano.
d. Tokotany Unitech Guobin No.1
Volavola: Vondrona fananganana raharaha + Yi Mo
Ny lambam-by maoderina translucent dia ampiasaina mba hamoronana tetezamita mihaona sy mihaja amin'ny endriny ivelany sy ivelany eo amin'ny habakabaka anatiny sy ivelany. Ny fanjavozavoana hita maso amin'ny fitaovana translucent dia manome halalin'ny habakabaka manankarena.
e.Shanghai Xintiandi “Tanànan’ny alitara”
Volavola: RSAA / Zhuang Ziyu Studio
Ity no volavolan'ny fametahana fifandraisana ao Xintiandi, Shanghai. Efatra metatra ny haavon'ny fametrahana azy, miaraka amin'ny ambainy vy na manidy na manakana azy io. Ny lamba amboniny dia misy kofehy manjelanjelatra, ary vinavinaina hamorona toerana volondavenona ny hazavana. Izy io koa dia afaka mampita hazavana sy aloka, alokaloka superimposed ary fifandraisan'olombelona. Manana ny tena izy sy sary an-tsaina, mahavariana.
f.Beijing Nestle Sense CAFÉ
Ny endrika dia mampifangaro ny habaka ankehitriny amin'ny tokotanin'ny Sinoa nentin-drazana, miaraka amina fametahana ambainy vy izay mamaky andiam-pifandraisan'ny tanàna taloha. Ny fandikana vaovao ny zava-niainana kafe sy ny tokotanin'ny Sinoa nentim-paharazana dia naseho tao an-tanànan'i Beijing.
Previous :: Ilay Ala Mahagaga, Manomboha dia an-tsambo 丨 haingon-trano Rongqiao + Volavola MU Next: Retro maoderina, tononkalo nostalgika amin'ny kanto sy malefaka | Dishang Design
2021 / 08 / 15 3487
2021 / 08 / 15 4370
2021 / 08 / 15 3865
2021 / 08 / 14 3587
2021 / 08 / 14 4016
2021 / 08 / 14 3385